Maitiro Ekutarisa, Kubvisa, uye Kudzivirira Malware kubva kune yako WordPress Siti | Martech Zone
Maitiro Ekutarisa, Kubvisa, uye Kudzivirira Malware kubva kune Wako WordPress Siti
Mugovera, January 13, 2018 Mugovera, January 13, 2018 Douglas Karr
Vhiki rino raive rakabatikana. Imwe yeasina-purofiti yandinoziva akazviwana ari munyatwa - yavo WordPress saiti yaive nehutachiona nemarware. Iyo saiti yakabiwa uye zvinyorwa zvakaitwa kune vashanyi vakaita zvinhu zviviri zvakasiyana:
Kwayedza kukanganisa Microsoft Windows ne malware.
Ndakaona kuti saiti iyi yakabiwa pandakaishanyira mushure mekubaya baya tsamba yavo yazvino uye ini ndakabva ndangovazivisa nezvezviri kuitika. Nehurombo, kwaive kurwisa kwakaomarara kwandakakwanisa kubvisa asi pakarepo ndakadzorera saiti yacho pakuenda kunorarama. Iyi tsika yakajairika nevabati ve malware - ivo havangobise saiti, ivo zvakare vanowedzera anoshandisa mushandisi kune ino saiti kana kushandura rakadzika reWordPress faira iro rinobaya zvakare kubira kana rabviswa.
Malware inyaya inoenderera pawebhu. Malware inoshandiswa kuwedzera kukanda-kuburikidza nemitengo pazvishambadziro (kubiridzira kwekushambadzira), kuwedzera manhamba epawebhusaiti kuwedzeredza vashambadzi, kuyedza kuwana mukana kune data revaenzi uye zvemunhu, uye nguva pfupi yadarika - kuchera mari yemadhora. Vashandi vemumigodhi vanobhadharwa zvakanaka padhata remigodhi asi mutengo wekuvaka michina yemigodhi nekubhadhara mari yemagetsi kwavari wakakosha. Nekuvanda pakavanda makomputa, vacheri vanogona kuita mari vasina mari.
WordPress uye mamwe mapuratifomu akajairwa makuru makuru evanobira nekuti ndiwo hwaro hwemasaiti mazhinji pawebhu. Pamusoro pezvo, WordPress ine theme uye plugin dhizaini iyo isingadziviriri epakati saiti mafaera kubva kune ekuchengetedza maburi. Pamusoro pezvo, nharaunda yeWordPress yakatanhamara pakuona nekucheka maburi ekuchengetedza - asi varidzi vesaiti havana kungwarira nezvekuchengetedza yavo saiti kuvandudzwa neshanduro dzichangoburwa.
Saiti iyi chaiyo yakaitirwa pane GoDaddy yechinyakare webhu inomiririra (kwete Kutungamirirwa neShoko rePepanhau rekugamuchira), iyo inopa zero kudzivirira. Ehezve, ivo vanopa iyo Malware Scanner uye kubviswa service, zvakadaro. Managed WordPress makambani ekubatira akadai se Flywheel, WP Engine, LiquidWeb, GoDaddy, uye Pantheon zvese zvinopa zvoga kugadzirisa kuti nzvimbo dzako dzirambe dziripo panguva dzatinoburitsa patinoona uye patched. Vazhinji vane malware scanning uye vakasarudzika madingindira uye mapulagini kubatsira varidzi vesaiti kudzivirira kubiridzira. Mamwe makambani anoenda nhanho kumberi - Kinsta - yepamusoro-inoshanda Inotungamirwa WordPress inomiririra - kunyange inopa a chengetedzo garandi.
Yako Saiti Yako Yakasarudzika yeMalware:
Kune akawanda masayiti epamhepo anokurudzira "kutarisa" yako saiti kune malware, asi ramba uchifunga kuti mazhinji acho haasi kunyatso tarisa yako saiti zvachose mune chaiyo-nguva. Real-time malware scanning inoda yechitatu-bato kukambaira chishandiso icho chisingakwanise kupa pakarepo mhedzisiro. Iwo masayiti anopa chenguva pfupi cheki ndiwo masayiti akambowana saiti yako ine malware. Mamwe emasaiti anotarisa malware pawebhu ndeaya:
Google Transparency Report - kana yako saiti yakanyoreswa neWebmasters, ivo vanobva vakuratidza iwe pavanokambaira saiti yako nekuwana malware pairi.
Norton Safe Web - Norton zvakare inoshanda webhu bhurawuza plugins uye inoshanda sisitimu software iyo ichavharira vashandisi kubva manheru kuvhura peji rako kana vakaisvibisa. Varidzi vewebhusaiti vanogona kunyoresa pane saiti uye ndokumbira yavo saiti kuti iongororwe kana yangochena.
Sucuri - Sucuri anochengeta runyorwa rwemasayiti malware pamwe chete neshumo yekuti vakapihwa mazita. Kana yako saiti yakacheneswa, iwe uchaona a Kumanikidza Re-Scan chinongedzo pasi pechinyorwa (muzvinyorwa zvidiki). Sucuri ine yakasarudzika plugin inoona nyaya… uye ndokusundidzira iwe muchibvumirano chegore kuti ubvise.
Yandex - kana iwe ukatsvaga Yandex kune yako domain uye woona "Zvinoenderana neYandex, saiti iyi inogona kuve nenjodzi ”, iwe unogona kunyoresa kuYandex webmasters, wedzera saiti yako, enda kune Chengetedzo uye Mhirizhonga, uye kumbira yako saiti icheneswe.
Phishtank - Vamwe vabiridzi vanoisa zvinyorwa zve phishing pane yako saiti, izvo zvinogona kuita kuti dura rako rinyorwe sedunhu re phishing. Kana iwe ukapinda iyo chaiyo, izere URL yeiyo yakashumwa malware peji muPhishtank, unogona kunyoresa nePhishtank uye vhota kuti kana kwete zvechokwadi iri nzvimbo yekubiridzira.
Kunze kwekunge yako saiti yakanyoreswa uye iwe uine account yekutarisisa kumwe kunhu, iwe ungangowana mushumo kubva kune mushandisi weimwe yeaya masevhisi. Usaregeredza chenjedzo… nepo iwe usingaone dambudziko, manyepo enhema haawanzo kuitika. Idzi nyaya dzinogona kutora yako saiti de-indexed kubva kunjini dzekutsvaga uye yakavharirwa kubva kumabhurawuza. Zvakaipisisa, vatengi vako vanogona uye vatengi varipo vanogona kushamisika kuti isangano ripi ravari kushanda naro.
Unotarisa Sei kune Malware?
Akawanda emakambani ari pamusoro anotaura nezvekuti zvakaoma sei kuwana malware asi haina kunyanya kuoma. Izvo zvakaoma kunyatso kufunga kuti yakapinda sei saiti yako! Kodhi yakaipa inowanzo kuwanikwa mu:
rechengetedzo - Pamberi pechinhu chero chipi zvacho, chinongedze kuna a peji rekuchengetedza uye tsigira yako saiti. Usashandise WordPress 'default kugadzirisa kana plugin yekuchengetedza sezvo izvo zvichiri kuendesa WordPress pane server. Iwe unoda kuona kuti hapana arikuita chero PHP faira pane ino saiti. Paunenge uripo, tarisa yako .htaccess faira pane webhu server kuti ive nechokwadi chekuti haina kodhi yechisimba iyo inogona kunge ichidzosera traffic.
kutsvaka yako saiti mafaera kuburikidza neSFTP kana FTP uye woona yazvino mafaira ekuchinja muma plugins, madingindira, kana epakati WordPress mafaira. Vhura iwo mafaera uye tsvaga chero edhisheni inowedzera zvinyorwa kana Base64 mirairo (inoshandiswa kuviga server-script kuuraya).
enzanisa iyo yepamoyo WordPress mafaera mune yako dhairekitori, wp-admin dhairekitori, uye wp-inosanganisira madhairekitori kuti uone kana paine mafaera nyowani kana akasiyana saizi mafaera aripo. Troubleshoot yega yega faira. Kunyangwe iwe ukawana nekubvisa kubira, ramba uchitsvaga sezvo vazhinji vabeki vanosiya kumashure kuti vatapure zvakare saiti. Usango nyora kana kuisazve WordPress… mavhavha anowanzo wedzera magwaro asina kunaka mudhairekitori remidzi uye kudaidza script imwe nzira yekubaya kubira. Iwo mashoma akaomesesa malware zvinyorwa anowanzo ingoisa script mafaira mu header.php or footer.php. Mamwe magwaro akaomarara achanyatso shandura yega yega faira rePHP pane sevha nekodhi rejekiseni kuitira kuti uve nenguva yakaoma kuibvisa.
Bvisa chechitatu-bato kushambadzira zvinyorwa zvinogona kunge zviri izvo sosi. Ini ndaramba kuisa matsva ekushambadzira kana ndaverenga kuti akabiwa online.
Tarisa ako maposita dhatabhesi tafura yezvakanyorwa zvakanyorwa mune zvemukati zvemukati. Iwe unogona kuita izvi nekutsvaga zvakapusa uchishandisa PHPMyAdmin uye nekutsvaga iyo yekukumbira ma URL kana ma script tag.
Usati waisa saiti yako mhenyu… yave nguva yekuomesa saiti yako kudzivirira pakarepo kubaya-jekiseni kana imwe kubiridzira:
Unodzivirira Sei Saiti Yako Kubva Mukubiwa uye Malware Akaiswa?
ongorora wese mushandisi pawebhusaiti. Hackers vanowanzo jekesa zvinyorwa zvinowedzera mushandisi mushandisi. Bvisa chero maakaundi ekare kana asina kushandiswa uye tumira zvirimo kune mushandisi aripo. Kana iwe uine mushandisi anonzi arun, wedzera manejimendi mutsva aine yakasarudzika login uye bvisa iyo admin account zvachose.
itangezve pasiwedhi yega yega mushandisi. Nzvimbo zhinji dzakabiwa nekuti mushandisi akashandisa password yakapfava yaifungidzirwa pakurwisa, zvichigonesa mumwe munhu kupinda muWordPress uye kuita chero chavanoda.
chokukuvadza iko kugona kwekugadzirisa plugins uye madingindira kuburikidza neWordPress Admin. Iko kugona kwekugadzirisa aya mafaera kunotendera chero hacker kuti aite zvakafanana kana vakawana mukana. Ita iyo yepamoyo WordPress mafaira asinyorwe kuitira kuti zvinyorwa zvisakwanise kunyora zvekare kodhi yekodhi. Zvese pamwechete ine plugin yakakura chaizvo inopa iyo WordPress kuomesa ine toni yezvinhu.
Manually dhawunirodha uye dzorerazve vhezheni dzazvino dzese plugin yaunoda uye bvisa chero mamwe ma plugins. Bvisa zvachose ma plugins ekutungamira ayo anopa zvakananga kupinda kune saiti mafaera kana dhatabhesi, izvi zvine njodzi zvakanyanya.
Bvisa uye chinja mafaera ese mune yako dhairekitori kunze kweiyo wp-yemukati dhairekitori (saka mudzi, wp-inosanganisira, wp-admin) nekumisikidza nyowani kweWordPress rakadzvanywa zvakananga kubva kune yavo saiti.
chengeta yako saiti! Saiti yandakashanda pavhiki ino yaive neyakare vhezheni yeWordPress ine anozivikanwa ekuchengetedza maburi, vashandisi vekare vasingafanire kuwana zvakare, madhara ekare, uye ekare plugins. Zvinogona kuve chero chimwe cheizvi chakavhura kambani kuti ibviswe. Kana iwe usingakwanise kuchengetedza yako saiti, ita shuwa kuti uiendese kune yakachengetedzwa yekutambira kambani iyo icha! Kushandisa mashoma emari pakubata ingadai yakachengetedza kambani iyi kubva mukunyadziswa uku.
Paunenge iwe watenda kuti iwe une zvese zvakagadziriswa uye kuomeswa, unogona kudzosa saiti irarame nekubvisa iyo .htaccess redirect. Paunenge uchingorarama, tsvaga hutachiona hwakafanana hwaimbove huripo. Ini ndinowanzo shandisa bhurawuza ekuongorora maturusi ekutarisa zvikumbiro zvemambure neiyo peji. Ini ndinoteedzera pasi rese network kukumbira kuti ndive nechokwadi chekuti haisi malware kana kusanzwisisika… kana zvirizvo, yadzokera kumusoro uye ichiita nhanho kwese zvakare.
Iwe unogona zvakare kushandisa inodhura yechitatu-bato malware kushanda pakuvheneka se Site Scanners, iyo inozoongorora saiti yako zuva nezuva uye ichikuzivisa iwe kana usinga nyorwe pane anoshanda malware ekutarisa masevhisi. Rangarira - kana yako saiti yakachena, haizongoerekana yabviswa kubva pamablacklist. Iwe unofanirwa kubata yega uye uite chikumbiro pane yedu runyorwa pamusoro.
Kuwana chakabiwa sezvizvi hakufadzi. Makambani anobhadharisa mazana emadhora emadhora kuti abvise izvi zvinotyisidzira. Ini ndakashanda asingasviki maawa masere kubatsira iyi kambani kuchenesa saiti yavo.
Tags: ESETGoogle Safe Browsinggotlmsmalwaremalware kuongororaNorton Safe Webnorton safesitePhishTankSiteAdvisorsophosSpamHaus DBLsucuriSucuri Malware LabsWordPressYandex
Iyo Inbound Yekutengesa Yekutarisa: 21 Maitiro Ekukura